Ama-Makeup Brands Wamadoda - Amathrendi Kumadoda Anesitayela | Amadoda aSitayela
Izimonyo zabesilisa yinto ebuye ibekhona esikhwameni samathoyilethi sabesilisa abaningi. Kuyindlela eguquguqukayo, Yebo, uma ulandela inqubo, kugcina sekuyinto ebalulekile nsuku zonke. Amadoda amaningi aseyazama futhi ayakubona lokho ugcwalisa isifiso sokwenza ngcono ukubukeka kwakho.
Ngokunikezwa kwezinhlobonhlobo zemakethe nokusatshalaliswa okusheshayo nokusheshayo kwale mikhiqizo, amadoda amaningi aseqalile ukuzama i emisha yokulungisa izisihla sakho futhi uthuthukise izici zakho ngenxa yemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Uma udinga ukwazi kabanzi ngokuthi uwasebenzisa kanjani nokuthi imiphi imikhiqizo etholakalayo emakethe, qhubeka ufunda konke esikulungisile.
1 Makeup yamadoda Yimiphi imikhiqizo oyisebenzisa kakhulu?
2 Amathiphu ngaphambi kokufaka izimonyo
3 Isisekelo sezimonyo
5 Ukulinganisa izimpushana
6 Imikhiqizo yokwenziwa kwamanye amadoda
Makeup yamadoda Yimiphi imikhiqizo oyisebenzisa kakhulu?
Imikhiqizo ebalulekile yokwenza izimonyo ngempumelelo isisekelo sokwenza izimonyo, ukufihla imibuthano emnyama kanye nezinye izimpushana zethoni. Le yimikhiqizo emi-3 esetshenziswa kakhulu futhi esebenza ngayo Ngeke kukuthathe imizuzu emi-5 ukukusebenzisa.
Emakethe kunemikhiqizo emikhulu esivele ibheja ngoba amadoda afuna ukubukeka enhle futhi eyinkimbinkimbi. Kuyindaba ye- UChanel obheja kumuntu wesimanje, ukuthi ufuna ukuheha ngaso sonke isikhathi.
UGaultier uqhekeza umhlaba, ihlala ihlazisa kuwo wonke amanoveli ayo futhi idala imfashini ngakho konke okuphakanyiswayo. Le mikhiqizo emibili idale izisekelo zokwakheka, izimpushana zebronzi, izifihli, izinkophe zamehlo, i-mascara yamehlo nebunzi, nama-lip balms.
Amathiphu ngaphambi kokufaka izimonyo
Nazi ezinye zezinyathelo noma uchungechunge lwenqubo abesifazane futhi abayisebenzisayo lapho befaka izimonyo. Kumele hlanza ubuso kahle ngejeli elihlanzayo bese sebenzisa isithambisi esihle esingakhanyi. Sizosebenzisa kamuva umqondisi kulezo zindawo okufanele zilungiswe ikakhulukazi, kugcizelelwa imibuthano emnyama.
Ngemuva kwalokho sizosebenzisa eyethu isisekelo se-maquillaje futhi sizokwenza imiphumela ifaneleke ngabathile izimpushana ezihlangene. Isinyathelo sokugcina kungaba ukufaka isicelo se- ukulungisa izindebe, yize amanye amadoda ekhetha ukulungisa izinkophe zawo, amashiya noma ukuthinta okuncane kokushaywa.
Uma unentshebe, akuyona inkinga ukugcoba izimonyo. Kubalulekile ukuthi ungazenzi indawo lapho izinwele zikhona khona futhi ungashiyi imikhondo yesisekelo noma impuphu.
Kubalulekile ukukhetha umthunzi ofana nawo kumbala wesikhumba sakho, Kufanele ibe uketshezi kakhulu futhi izobonakala ihlangana esikhunjeni sakho kahle, ngaphandle kokubukeka kokufakelwa. Izisekelo zezimonyo zivame ukwenziwa kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, kepha uma kunokwenzeka khetha okufanelekile kakhulu esikhunjeni sakho, uma sinamafutha, somile noma siyinhlanganisela. Izosetshenziswa ngeminwe yezandla noma ngosizo lwesiponji esikhethekile sokwenza izimonyo.
Isikhumba sabesilisa sehlukile kwesabesifazane. Ikhiqiza i-collagen eningi futhi izindlala zakho ezibushelelezi zikhudlwana ngakho-ke isikhumba sakho asizweli kakhulu futhi singamelana nemikhiqizo eqinile. Njengezincomo, kungcono ukuthi ukhilimu uqukethe uhlobo oluthile lwe-anti-mibimbi elungile, i-sunscreen ethile futhi uma ingahle ingaqukethe amakha.
Sikhethe uhlobo lwe-Loreal, ngesisekelo sokwenza izimonyo esisetshenziswa i-unixex nazo zonke izinhlobo zesikhumba. Eminye imikhiqizo ekhethiwe ngumkhiqizo weChanel onesikhumba nethoni ephelele, uKanebo Sensai ongumkhiqizo womkhiqizo waseJapan. Futhi u-Elizabeth Arden brand onoketshezi ngesimo se-mousse.
Iyafana nesisekelo sokwenza izimonyo, kepha ngokuthungwa okuthe xaxa kakhulu ukwazi ukufihla izindawo ezithile ezifana nezinduna, izibazi, amabala nobubomvu. Ukuyisebenzisa, kungcono ukusebenzisa isiponji ukuze ama-globs angakheki futhi uma kungenzeka, ungasebenzisi izilungisi eziqukethe ukukhanyisa noma ukukhanya, ngoba kuzokwenza ukubonakala kwesifazane.
Kuyisiphetho sokugcina sazo zonke izimonyo. Kumele bahlinzeke ngethoni elingana nesikhumba sakho kanye nokuqedwa kwe-matte, ukuze kungakhanyi ukukhanya ebusweni. Izimpushana zibalulekile uma ufuna isisekelo sakho sokwenza izimonyo sizohlala amahora amaningi ekupheleni kosuku lwakho. Ingasetshenziswa ngesiponji esithambile noma ngebhulashi elijiyile.
Amasampula esinawo angumbumbano we-powder oguqukayo ovela ku-brand MMUK kanye ne-bronzing powder enethoni ye-terracotta evela eGuerlain.
Imikhiqizo yokwenziwa kwamanye amadoda
Impushana enemibala: yizo eziqukethe imiphumela eshukiwe noma imibala ebomvu, kepha enikeza ukukhanya okuqedile. Ama-powders kufanele abe nomphumela we-matte futhi angasetshenziswa ngebhulashi elibanzi noma ibhulashi le-kabuki.
I-mascara: Kungcono ukusebenzisa i-mascara esobala ukunikeza lokho kuthintwa kwemvelo kuzinkophe zakho. Uma udinga ukuwasonga kukhona ama-curlers akhethekile, kepha ungawagoqi ngaphezu kwesidingo.
Isilungisi samashiya: Unganakekela amashiya akho ngemikhiqizo ethile ukuze uwashiye ehlanganisiwe futhi enamahlathi. Kunconywa ukuthi kusetshenziswe i-fixative ecacile noma ipensela ensundu ngokunsundu ukugcwalisa ama-brows sparse.
Njengesiphetho sokugcina, kuhlala kushiwo ukuthi izimonyo zamadoda ya kuyingxenye yesimiso. Abesilisa futhi kudingeka bafihle ukungapheleli okuthile noma bathande ukubukeka okuhle kakhulu kunabo. Njengeseluleko kuzohlala kulungile sebenzisa imikhiqizo esezingeni elifanele nokuthi zifana nebala lesikhumba sakho, ngakho-ke umphumela uzoba wemvelo kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Imikhiqizo yokubumba yabesilisa